Umculi uSteve McDonald Ufumana abalandeli abatsha ngeNcwadi yakhe yaBadala yokuBala | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umculi uSteve McDonald Ufumana abalandeli abatsha ngeNcwadi yakhe yokuDala yabantu abadala
UYesu Arjona Montalvo | | Abadlali, ngokubanzi
Xa igcisa laseCanada USteve McDonald Ugqibe kwelokuba afudukele nosapho lwakhe kwisiqithi esiyiparadesi iBali, eIndonesia malunga neminyaka emithathu eyadlulayo, akazange azithathele ingqalelo ngokupheleleyo iziphumo zoko shiya igalari yobugcisa bemveli kwaye nokuba noluhlu lwabathengi abazinikele kwimisebenzi yakhe. Into emangalisa ngakumbi kukuba wayengenalo nofifi lokuba kuya kumkhokelela ekubeni aqale ukudala ubugcisa bokuba abanye abantu babenze umbala.
Ubonakalisile umsebenzi wakhe kwilizwe liphela, kwaye uye wanwenwela kwihlabathi lonke ngenxa Amazon. Uninzi lwepeyinti yakhe luphele kwezinye zeyona ngqokelela yeenkampani kunye neyabucala. Kodwa ngoku wajongana nomceli mngeni onzima ekufumaneni indlela yokubonisa ubugcisa bakhe kubaphulaphuli abatsha kwindawo ekude yehlabathi.
Njengoko kubonisiwe McDonald, isisombululo sasiyinxalenye yesiphelo kwaye ngokuyinxenye isigqibo sokutshintsha indlela ayepeyinta ngayo.
Umsebenzi wam uye uncipha ngokuncipha, kwaye eyona nto bendithanda ukuyenza kukuzoba. Ndiqale ukungazikhathazi kangako ngombala wemisebenzi yam kwaye ndixhalabise ngakumbi ngemilo kunye nomgca. Umbono wokuvelisa incwadi yemibala yabantu abadala uvela kwabo bamngqongileyo, utshilo uMcDonald.
Ndihlala ndizithatha njengomyili wekhabethe, kwaye njengoko umsebenzi uqalile ngokuya usanda ngakumbi, ndaqala ukuyeka ukunika umbala wam imisebenzi. Ke ndiye ndaqala ukufumana iingcebiso ezininzi ngakumbi nangakumbi kumagcisa endisebenza nawo, abathengi, kunye nakwiintombi zam apho umsebenzi endiwenzayo unokuba mkhulu ngombala.
Ugqibe kwelokuba aqale iprojekthi yencwadi enemibala apho avelise khona iinkcazo zobugcisa zemizi eyaziwayo kwihlabathi liphela. Ukusuka eStockholm ukuya eNew York, imizobo iyaphindaphindwa Izikhumbuzo ezingekenziwa nakwiindawo zokuhlala ezaziwayo zeso sixeko. UMcDonald's utyelele uninzi lwezi ndawo, kodwa uninzi lwemizobo Zisekwe kwimifanekiso yesisombululo esiphakamileyo ithathwe ngu Abaseki bezithombe abazinzileyo nabaziwayo.
Umbono wakhe waba nomdla kwangoko kwinani leenkampani ezishicilele kakuhle. Intengiso kwiNcwadi yemibala yabantu abadala inyuke kakhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo kwaye iindawo ezininzi zokuthengisa zazikhangela izimvo ezintsha kunye nomxholo omtsha.
UMcDonald waqhakamshelana nomshicileli osekwe eSan Francisco, kwaye incwadi yakhe yokuqala enesihloko 'Izixeko ezintle'.
Ukukhethwa komshicileli kunengqiqo kuMcDonald. Umpapashi wayenerekhodi eqinisekisiweyo yoyilo olukhulu kunye neeprojekthi zokuprinta. upapasho olutsha. Babenayo ne-vibe epholileyo ebonakala ngathi ilungile kwiincwadi zokubala.
'Izixeko ezintle' ine Amaphepha angama-58 emifanekiso kwaye ijolise kuye nawuphina umntu onomdla wokwakha kunye nokufaka imibala eneenkcukacha. Umqulu wokuqala usondele Iikopi ezingama-400.000 Kwaye kuye ipapashwe kumazwe angaphezu kwama-22. UMcDonald uthi akothuswa yimpumelelo yeencwadi ezinemibala yabantu abadala.
Sisiyobisi sokwandisa ubuchule ngezi ncwadi zinemibala. Abantu bathetha ngendlela enyangayo ngayo, enciphisa uxinzelelo. Andicingi ukuba le yeyona nto ibala imibala, ndicinga ukuba iyafana nayo nayiphi na into yoyilo.
Ndibuyele ekhaya kwi Ingqungquthela emva kweminyaka emibini eBali, uMcDonald kunye nomshicileli waseSan Francisco banezicwangciso, kwaye sele ukhuphe iincwadi ezongezelelekileyo kule minyaka.
Enye yezinto ezintle malunga nomsebenzi endiwenzayo kwincwadi yokufaka imibala kukuba iyafana nanjengoko ibinjalo ngaphambili, kuphela ziboshwe ngendlela eyahlukileyo. Ndenza kwa into enye bendiya kuyenza, kunjalo, kuyamangalisa into encinci kum ukuba le ncwadi iphumelele kakhulu ukuza kuthi ga ngoku.
Ukuba ufuna ukwandisa ubuchule bakho ndikushiyele ikhonkco le-amazon ukuze ukwazi ukuthenga iincwadi azipapashileyo, kwaye azibizi kwaphela. Cofa kwikhonkco elilandelayo ukuya zibone.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Umculi uSteve McDonald Ufumana abalandeli abatsha ngeNcwadi yakhe yokuDala yabantu abadala
Esi sesona siphiliso esifanelekileyo sonyaka
Ukuqhuma okukhulu kwamandla kunye nobomi kwimifanekiso eqingqiweyo yobhedu yaseDe la Vega